Firefox Desktop Inozivisa Hapana Zvirongwa Zvezvino zvePWA Tsigiro | Linux Vakapindwa muropa
Pakati pemwedzi miviri yekupedzisira, ari Firefox browser browser vanochengetedza vakazivisa kuti vachabvisa SSB muFirefox 86. Nezvikonzero, matekinoroji eMozilla vanopokana kuti chimiro chine huwandu hwakawanda hwebugs uye hunotora nguva maererano ne bug bug.
Vanowedzera izvozvo chiitiko ichi chave kungowanikwa kuburikidza neakavanzika chivakamberi uye ivo zvakare vanopokana kuti "kutsvagisa kwevashandisi kwakaratidza zvishoma kana kusaona kubatsirwa kwebasa." Nezvikonzero zvese izvi, Firefox yekuvandudza timu yasarudza kumisa kusimudzira cheiri basa.
Kana vagadziri veFirefox vachiita sevanogutsikana nesarudzo yesarudzo iyi, hazvina kufanana kune vashandisi vazhinji vanotendeukira kunheyo kuti vaongorore sarudzo iyi.
Kune vazhinji vashandisi, chero zita ratinozvipa (Fake App, PWA, SSB ...), chokwadi chekuti basa iri harisi muFirefox rinogona kudimbura mushandisi anopfuura mumwe chete.
Vamwe vashandisi vanobvunza izvo zvidzidzo izvo zvakaratidza kuti vashandisi havana kuona chero mukana pamusoro peichi chiitiko uye izvo zvakakonzera kugamuchirwa kwesarudzo iyi. Kune vamwe, zviri nani kubviswa kweiri basa kunodzosera isiriyo chiratidzo.
Vanowedzera izvozvo zvingave zvinonakidza kushandisa nguva shoma yekugadzirisa mashandiro acho uye ita kuti iwanikwe seyakagadzika vhezheni muFirefox pane kuibvisa zvachose.
Nezve ichi chirevo chekupedzisira, timu yeFirefox inotsanangura kuti "kunyangwe kana mumwe munhu akazvipira kuita sarudzo inoenderana nekuitwa kweSSB", vanochengeta Firefox vanofanirwa kupa zviwanikwa kuti vazviongorore uye izvo zvinodawo mari yekuchengetedza.
Uyewo, nemari shoma, timu inotaura kuti havagone kuishandisa pamabasa anoita kunge ane mashoma pesheni pane yako basa. Uye kuwedzera pakurwadziwa kwevashandisi vanoda kushandisa chimiro ichi, Firefox software injinjini Dave Townsend anoti "parizvino hapana hurongwa hwePWA rutsigiro muFirefox.
Mukuona kwesarudzo iyi, vashandisi vazhinji vari kufunga nezvekuchengeta kana kuchinjira kuChrome / Edge nekuda kwekushaikwa kwechinhu ichi. Kusvika panguva iyoyo, SSB ichiri kutsigira Firefox 85.
Izwi rekuti progressive web application rinonzwisiswa kureva webhu kunyorera izvo zvinoshandisa APIs uye mashandiro ebrowser kupa ruzivo rwekushandisa rwekunze kuyambuka-chikuva webhu kunyorera.
Kuita kuti iwanikwe kune vashandisi, iyo PWA inofanirwa kununurwa zvakachengeteka (HTTPS), shandisa mumwe kana kupfuura vashandi vebasa uye uve newebhu webhu kuratidza. Kamwe iyo PWA painenge yavapo, mushandisi anogona kuiisa pane yavo mbozhanhare kana komputa kuti ishandise muhwindo isina kero bar senge yekuzvarwa application.
Nekudaro, kugadzira PWA hazvireve kuti ichave ichiwanikwa kuti iiswe mumabhurawuza ese pamapuratifomu ese.
Kwemakore akati wandei, Chrome yakatsigira PWA mubrowser yako, sezvinoitwa naEdge zvakafanana. Pa Android, Firefox inotsigirawo PWA, asi kumakomputa, Firefox yaisa PWA-senge ficha inonzi saiti-yakatarwa mabhurawuza (SSB ipfupi).
Kamwe kugoneswa uye kumhanya, SSB inobvumira mawebhusaiti kumhanya mumawindo avo, kunge desktop desktop isina kero bar, mabhatani ekufambisa kana imwe futi. Uku kushanda, uko kusati kwambopfuura danho rakatsiga vhezheni, kwakavanzwa kwenguva yakareba.
Uye kuimisa, nhanho dzinotevera dzinofanira kuteverwa:
MuFirefox tinofanirwa kuenda kunenge: gadzira mubara rekero uye pano isu tinofanirwa kutsvaga "browser.ssb.enabled" nekukopa ssb mune kero bar uye kutsiva iyo inoenderana kukosha ne "ichokwadi" nekudzvanya kaviri panhema, kana danho iri rapera, unofanira kutangazve bhurawuza.
Zvino, iwe paunovhura chero webhusaiti mune kero bar uye tinya pane "Peji Yekuita" menyu uye pano unofanirwa kusarudza "Shandisa saiti iyi mune application mode" uye saiti ichavhura mune rakasiyana hwindo risina kero bar.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Firefox Desktop Inozivisa Hapana Zvirongwa Zvezvino zvePWA Tsigiro